Resaka tontolo iainana amin’ny blaogy tamin’ity herinandro ity · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Oktobra 2007 9:02 GMT
Jirom-pamoivoizana intelo miova mandeha amin'ny herin'ny masoandro any Capetown, haitaon-trano manara-penitra sy manaja ny tontolo iaianana any Akra, any Ghana, fanontaniana mipetraka amin’ ireo orinasa milaza azy ho « maitso » [manaja ny tontolo iaianana], ary zana-Gôrila mahafatifaty kely any Afrika. Ireo rehetra ireo no hovoaboasina amin'ny ireo blaogy miresaka tontolo iainana amin'ny global voices androany.
Atombotsika any Afrika Atsimo sy ny vaovaon'ireo jirom-pamoivoizana intelo miova mandeha amin'ny herin'ny masoandro ny resaka, izay heverin'i Carbon Copy ho tena fiandohan'ny « fametrahana amin'ny toerany eo amin'ny sarintany tokoa ireo angovo azo avaozina ». Amin'io lahantsoratra io ihany koa no ilazany ny ilana ny « rivotra » izay manome toerana ireo tetik'asa goavana, sy tetik'asa mahomby mba hamporisihina ny maro an'isa hampiasa ireo angovo « madio ». I Carl mpiblaogy ao amin'ny Greencars koa dia manoratra momba ireo jirom-pamoivoizana intelo miova mandeha amin'ny herin'ny masoandro, izy dia manohana io tetik'asa io no sady manolotra fanampim-panazavana amin'izay antom-pisiany.
Araka ny henoko, ny fampiasana jirom-pamoivoizana intelo miova vaventy dia mitovy fandaniana herinaratra amina trano misy efitra fandriana telo, ka raha esorina tsy handeha amin'ny herinaratra intsony ireo jirom-pamoivoizana intelo miova rehetra ao an-tanànan'i Cape Town dia toy ny nahena trano 1'200 ny fandaniana herinaratra.
Asongadin'i Carl ireo lafiny roa voalohany ahazoana tombontsoa avy amin'ity fampiasana jirom-pamoivoizana intelo miova mandeha amin'ny herin'ny masoandro ity,
Ankoatry ny tombontsoa mivantana hoan'ny tontolo iainana vokatry ny fampiasana angovo azo avaozina [tsy lany ampiasaina], mety misy vokatsoa hafa koa raha toa ka mateza kokoa noho ireo mandeha amin'ny herinaratra ireo jiro telomiova vaovao, dia hihena ireo fahasimbana, ary dia hihena koa ireo fikatsoan'ny fifamoivoizana, izany hoe hihena koa ny fandaniana solika noho ny fifamoivoizana.
Manahy ihany izy ny amin'ny halatra na izay mety ho fanimbàna ireo takelaka mpisintona ny herin'ny masoandro, anefa manantena ihany izy fa tsy hisy ny toy izany amin'ity indray mitoraka ity.
Mitodi-doha any Ghana indray : ampitain'ny blaogy African Architecture and Design, amin'ny alalan'ny lahantsoratra mikasika ny tao-trano manara-penitra sy manaja ny tontolo iainana any amin'ny renivohitra Akra [Accra], izany dia vao mainka mibaribary amin'ny fitombon'ireo trano izaran'ny tompontrano maro [copropriétés | condominiums] izay
… hampiharihary ireo fitaovana mora afarana hampiasaina any Ghana : volo sy bararata ho an'ny rindrintrano madinika sy aro-fanina lavarangana; rihitra ho an'ny rindrina; ary barika vita nitaterana solika hoan'ny aro-orana. Izay raha ampifangaroana amin'ireo hazo avy any an-toerana dia hanome endrika manaraka ny toetr'andro ireo rindrina.
Mba efa nanontany tena ve ianareo mikasika ireo orinasa manao dokam-barotra sy milaza ho « maitso » [manaja ny tontolo iaianana] raha tena mba manao izay lazainy tokoa izy ireny ? Ao amin'ny lahatsoratra « Greenwash on Spincycle » i Andreas izay manoratra ao amin'ny blaoginy Antidote dia manazavazava hevitra mba hahalalana tsaratsara kokoa sy ananana «fijery maranitra anavahana izay tokony inoana amin'izay rehetra ambara amintsika ».
Vao nivoaka izy ity : tsara ny maitso, izay indray izany … Maitso. Maro amin'ireo orinasa manerana izao tontolo izao no tonga saina fa làlana afahana mampitombo kokoa ny tombo-barony raha toa ka ampahafantariny amin'ny alàlan'ny dokam-barotra tsara petraka izay arahina fiovan'anarana mitentina amana tapitrisany maro.
Ho an'ny sasany, mety ho lalàna misarika any amin'ny fomba vaovao fitantanana orinasa izay manaja kokoa ny tontolo iainana izany, maro koa anefa ireo izay tsy resy lahatra sy miandry hahita ny ho avy aloha.
Ho fehin'ity jery indray mifaoka ity, dia mitodi-doha indray any Kongô isika, ny fitohizan'ny ady dia mbola manahirana ny fiainan'ny mponina any sady manelingelina ireo ezaka hiarovana ny Gôrila. Tsy mitsahatra ny mandefa fanampim-baovao momba ny fivoatry ny raharaha any an-toerana ny blaogy Gorilla protection, heno ary fa maty ny iray tamin'ireo mpiambina ala.
« Tantely amam-bahona ny fiaianana » ka mba tsy hamelana anareo amin'izany vaovao ratsy izany dia indro ny sarin'i Kabila izay zana-Gôrila mahafatifaty sady nampitain'izany blaogy izany ihany.
Tena mba haingana mihitsy izany fandikan-teny izany! miaiky aho e!
12 Oktobra 2007, 11:10
Aoka marina e ! Ny fanaonao anie no mba tiako arahina io fa tsy mety tratrako e, dia tsy maintsy mandika vitsivitsy isaky ny afaka aho, raha tsy izany tena lasa mihintsy fa mihena indray ny salanisantsika … misaotra antsika izany isika e 😉
12 Oktobra 2007, 18:44